Helitaanka 2 Muuqaal
Farsamooyinka Soo Bandhiga
Maareynta Xogta FAIR
Akhriska & Qoraalka
Qorista Siyaasadda iyo Xiriirka
Sayniska 2.0 - Internetka Aqoonta
Daacadnimo Cilmi Baaris
Maalgelinta Cilmi baarista
Kheyraadka Sayniska ee Furan
Aqoon isweydaarsiyo & Tababarro
Khudbadaha, wadahadallada & aqoon-isweydaarsiga
Proofreading & Tafatirka
Cilmi baarista Afrika
Aqoon isweydaarsiyo, Tababarro & Aqoon-isweydaarsiyo - Faafinta & Tafatirka dukumiintiyada cilmiga iyo sayniska - Arimaha Tacliinta Sare.
Aragtiyadu waxay ku koraan oo ku kobcaan isdhaafsiga dhaqameed iyo isdhaafsi dhaqameed.
Mawduucyada Koorsada & Mashaariicda aan ka shaqeyno
Helitaanka 2 Aragtida waxay bixisaa aragti cusub oo ku saabsan isgaarsiinta iyo maareynta Sayniska. Hadafkayagu waa inaan qalabeynno dhalinyarada iyo sidoo kale cilmi baarayaal khibrad u leh xirfadaha iyo xamaasada ay u baahan yihiin si ay ugu sii socdaan mustaqbal wanaagsan oo farxad leh. Waxaan ka shaqeynaa bey'ad caalami ah oo bixinaysa tababaro Ingiriis ah, Jarmalka, Griiga, Faransiiska, Iswidishka, Swahili, Afrikaans iyo Boortaqiiska.
Xiriirinta aqoonta isdhaafsiga ee udhaxeysa Afrika iyo Yurub Waxaan sii xoojinaa xarumaha tacliinta iyo cilmi baarista qunsuliyada Afrika…
MOOC-ka Cilmiga Furan ee MOOC waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo ardayda iyo cilmi baadheyaasha xirfadaha ay ugu baahan yihiin si ay ugu fiicnaadaan buuga casriga ah…
Wershadaynta, been-abuurka iyo khayaanada ayaa ah tuhmanayaasha caadiga ah ee anshax xumada sayniska. Dib u soo celinta Adeegyada Dijital ah…
Daabacaadda iyo Xiriirka Dadweynaha
Aasaaska iyo waxyaabaha aasaasiga u ah daabacaada tacliinta iyo siidaynta dadweynaha guud ahaan anshaxa. Tababarkayaga iyo aqoon isweydaarsigayadu waxay bixiyaan khuburo…
Qaab dhismeedka Qalabka dhijitaalka ah ee la soo xulay - Aqoon-yahan cilmiyaysan oo ku xirma dhammaan sheybaarka wareega baarista ayaa ah…
Aaladaha dijitaalka ah waxay bixiyaan fursado kaladuwan oo loogu talagalay in lagu wanaajiyo isgaadhsiinta ee daah furnaanta cilmi baarista iyo hufnaanta. Kuwaani waxay noqon karaan…
Hadaad raadinayso koorsooyin iyo talo ku saabsan Akhrinta iyo Qorista waxad ka dooran kartaa mawduucyada soo socda: >> Qoritaanka Sayniska…
Sidee ayaad u qortaa CV ama waxaad dib ugu bilaabi doontaa shaqadii lagaa rabay talaabada xigta ee xirfadaada? Maxaa looga baahan yahay cudurka positio…
isdhaafsiga iyo dhaqamada kaladuwan
XIRFADAHA FARSAMADA CIIDAMADA KA SAMEEYA AFRIKA IYO YURUB
Waxaan xoojinaynaa xarumaha tacliinta iyo cilmi baarista qaaradda Afrika.
Muujinta astaamaha saynisyahannada Afrikaanka ah iyo guulaha ay gaareen
Waxaan ku dhiirigelinaynaa oo kula talinaynaa saynisyahannada Afrikaanka ah inay u dhisaan joogitaanka internetka ee guulaha ay ka gaareen waxbarashadooda.
Taageerida isku xidhka sayniska adduunka
Waxaan ka caawinaa saynisyahannada Afrikaanka ah iyo kuwa Yurub sidii loo heli lahaa iskaashi.
Wadashaqayn lala yeesho ururro la mid ah
Wada-hawlgalayaashayada waxaan bixinnaa taageero iyo wada-tashi dhinacyo kala duwan ah sida kobcinta hay'ad, dhisidda xirfadaha, tabarucaadka qalabka iyo is-weydaarsiga caalamiga ah ee aqoonta iyo ilaha.
Indha-indheyntii ugu dambeysay ee aragtida
Muuqaalkaagu waa sida aad wax u aragto - aragtidaada dhinaca gaarka ah ee sayniska, ganacsiga ama noloshaada shaqsiyeed. Helitaanka 2 Aragtida waxay kaa caawineysaa inaad heshid fahamka aragtida dadka kale, si aad u ballaadhiso safkaaga oo aad u hesho aqoon iyo faham. Inaad u furato aragtida dadka kale waxay ku siinaysaa muuqaal balaadhan oo ku saabsan aragtida iyo xaalad la siiyay. Isfahamka is-afgaradka ayaa aasaas u ah abuurida faa iidada labada dhinac.
Baahida Waxbarashada ee Maaraynta Xogta Cilmi baarista
Waxaan ka walwalsanahay 'Ma aqaan waxaan aqoon. Taasi waa xaalada arday badan markay la kulmaan arimo la xiriira maareynta xogta. Ka dib sannado ku-celcelin ah falanqaynta xogta cilmi-nafsiga iyo 6 bilood oo si qumman ula macaamilayay Maareynta Xogta Cilmi-baarista (RDM) ee qaybtaas, waxaan ahay mararka qaarkood…
ZBW Mediatalk wareysi ku saabsan AfricaArXiv iyo kala duwanaanta luqadeed ee sayniska
Wareysiga soosocda waxaa markii hore lagu daabacay zbw-mediatalk.eu waxaana shati kahelay Creative Commons BY 4.0. Ku raaxayso akhriska! Korinta hufnaanta, helitaanka furan iyo wadahadalka caalamiga ah ee cilmi baarista ayaa muhiim u ah wax ka qabashada gudaha iyo sidoo kale caqabadaha adduunka sida isbedelka cimilada ee socda. Ku celcelis ahaan sayniska furan wuxuu kuu oggolaanayaa wax intaa ka badan…
Qalabka loo yaqaan "Source Source" iyo qalab loogu talagalay cilmi-baaris wanaagsan
Websaydhkii ugu horreeyay ee 'Open Science MOOC' wuxuu diiradda saarayaa Module 5: Software Open Research iyo Source Source (Open Source) waxaana gacan ka gaysanaya saaxiibkeen André Maia Chagas. Bogagga hore ee bandhiggan ka daawo zenodo.org/record/3242340 Cite sidii: Maia Chagas, Andre. (2019, June). Keenista sayniska qarniga 21-aad: Fur…
Dib-u-eegida asaaga bulshada ee ku aaddan u diyaar garowga
Dhowr maalmood ka hor May 15-keedii Leipzig, Jarmalka Machadka Mx Planck for Evolutionary Anthropology (MPI-EVA), Corina Logan waxay casuumtay Denis Bourguet iyo Thomas Guillemaud oo ka socda Beesha Peer si ay aqoon-isweydaarsiga uga helaan adeeggooda aan macaashka aheyn. sayniska: Xal cilmi-baadhe ah oo lagu hagaajiyo sayniska iyo…
Sayniska ee Qalalaasaha - Ma Xal u Yahay Sayniska Furan?
Maaddaama Sayniska Furan uu noqdey buzzword soo noqnoqda oo ku saabsan horumarkii ugu dambeeyay ee saynis-yahan, maqaalkani wuxuu soo koobayaa waxa horumarkan ka mid ah. Waa maxay sababaha wadahadalada ku saabsan Helitaanka Furan, Xogta Furan iyo Dib-u-eegista Feejignaanta? Isbedela teknolojiyadeed ayaan filan karnaa iyo saameyn intee le'eg ayay ku yeelan doonaan bulshada iyo…
Maareynta Xogta Sayniska iyo Cilmi baarista: dib u eegis aqoon isweydaarsi ah
Maaddaama Xogta Furan iyo Mabaadi'da FAIR ay aad u sii badan yihiin oo ay noqdeen halbeegyo ku saabsan geedi socodyada sayniska, daahfurnaanta iyo dib-u-soo-saaridda qulqulka cilmi-baarista oo dhan ayaa bilaabmaya in loo aqoonsado inay yihiin ku-camal-fal wanaagsan oo saynis ah (eeg tusaale ahaan barnaamijka 'SPARC' opencholarchampions.eu). Si aad ugu gudubto dhanka xogta furan iyo…
Kiis loogu talagalay Qalabka Sayniska ee Furan
Soo bandhigid ku saabsan Qalabka Sayniska ee Furan (Open Science Hardware) oo lagu qabtay Berlin Sayniska Furan - Cilmi baarista dib loo daabici karo - Kulankii ugu dambeeyay ee 06-da Feb. 2019. (2019, Febraayo). Kiis loogu talagalay Qalabka Sayniska ee Furan. Zenodo. doi.org/10.5281/zenodo.2564076
Bal ka fikir mustaqbal Cilmi-baaris oo lagu qeexay qiyamka furan
- Soo bandhigida 'Science Open' MOOC ee uu qoray John Tennant. Maqaalkan waxaa markii hore lagu daabacay genr.eu | DOI: 10.25815 / 6hyr-g583 Dunida cilmi baaristu uma shaqeyn sidii loo rabay. Dhinacyada oo dhan waxaan ku aragnaa arrimaha dib-u-abuurista, dhaqamada cilmi baarista ee su’aal la galiyo, carqalada iyo darbiyada, cilmi baarista qashinka, iyo…
Maqaalkaan waxaa markii hore lagu soo daabacay barta-bookhelf.blogspot.com waxaa soo diray saaxiibkeena Duncan Nicholas. In kabadan hal sano oo shaqo kadib, dokumentiga Istaraatiijiyadda Fursadaha-furan ayaa si buuxda loo daabacay. Shaqada waxaa dhiirrigeliyay aasaaska horumarinta istaraatiijiyadda ee OER, Kooxda Shaqeynta Aqoonyahanada 'FORCE11' ee Aqoonyahannada Wadaagga ah, waxaana soo saaray…
Macaamiisha la soo xulay
Helitaanka 2 Muuqaal Waxyaabaha ku jira ayaa shatiyeysan CC BY 4.0 Caalami.